Falanqaynta durdurrada bulshada ee la socda DataSift | Martech Zone
Arbacada, Nofeembar 16, 2011 Talaado, September 25, 2012 Douglas Karr
DataSift waa madal awood-waqtiga dhabta ah awood-shaandheynta xogta warbaahinta bulshada iyo waa mid ka mid ah kaliya laba shirkadood oo adduunka ah oo leh liisan si ay u sameeyaan Twitter xogta ganacsi ahaan loo heli karo ujeedooyin aan la soo bandhigin, taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay raadiyaan qoraallo iyagoo isticmaalaya metadata ku jirta tweets. Oo waxay ku samaysaa iyada oo leh interface aad u qurux badan oo qurux badan iyo sidoo kale a qalabka dhismaha iyo adkeyn API (maktabadaha macmiilka ayaa la heli karaa) oo leh luuqad su'aal u gaar ah.
nuxurka.kastoo "HTC, Nokia, RIM, Apple, Samsung, Sony"
DataSift waxaa aasaasay Nick Halstead si looga caawiyo ururada inay horumariyaan fahamkooda iyo isticmaalka Warbaahinta Bulshada. DataSift waxay diirada saareysaa soo saarida heerka farsamada shaandheynta xogta farsamada iyo hal abuurka wadista ee Xogta Weyn. DataSift waxay kubilaabatay nolosheeda sidii meel ka baxsan TweetMeme, adeegga caanka ah ee wararka lagu qoro Twitter-ka. Ka dib marki aan goob joog u ahaa sida dhaqsaha badan ee warbaahinta bulshada u saameysay ururada, Nick Halstead wuxuu u dhaqaaqay inuu abuuro madal ka caawiya shirkadaha inay maareeyaan Baraha Bulshada isla markaana ka faa'iidaystaan ​​fikradaha laga dhex heli karo xogta.
DataSift ma xadideyso raadinta iyada oo ku saleysan ereyada muhiimka ah waxayna u oggolaaneysaa shirkadaha nooc kasta ha ahaadeene inay qeexaan miirayaasha aadka u murugsan, oo ay ku jiraan goobta, jinsiga, dareenka, luqadda, iyo xitaa saameynta ku saleysan dhibcaha Klout, si ay u bixiyaan aragti iyo falanqeyn deg deg ah oo aad u gaar ah. Tikniyoolajiyada 'DataSift' waxay sidoo kale u adeegsan kartaa nidaamka shaandhaynta xogta wixii nuxur ah ee ka wakiil ah isku xidhka boostada lafteeda, iyada oo shirkadaha siisa sawir sax ah oo dhammaystiran.
Warbaahinta bulshada ayaa kordhisay dabeecadda ganacsiga ee durba xawaaraha ku socda. Shirkaduhu ma haystaan ​​raaxo ay ku kala shaandheeyaan boqolaal milyan oo xogag maalin kasta ah, oo kaliya inay marka labaad qiyaasaan tallaabada ku habboon Waxa ay u baahan yihiin waa helitaan rasmi ah ee waqtiga dhabta ah ee sirdoonka ee saameynta ku leh ganacsigooda - iyaga oo u oggolaanaya inay si fudud oo dhakhso leh u ogaadaan ugana jawaabaan dhacdooyinka waaweyn ee isbeddellada, dabeecadaha bulshada, dookha macaamiisha - iyo ugu dambeyntiina, ka hortagga dhibaatooyinka kasta ee soo socda. Waxaan la yaabnay baahida loo qabo barnaamijkeenna Mareykanka oo waxaan furaneynaa xafiis lagu daboolo baahidaas. Aasaasaha, Nick Halstead.
Codsiyada suurtagalka ah ee loo yaqaan 'DataSift' waa kuwo aan xad lahayn, oo ay ku jiraan suuqgeynta, xayeysiinta iyo adeegga macaamiisha, iyo kuwo kale oo badan. DataSift wuxuu soo bandhigayaa moodal qiimaheedu daruur ku saleysan yahay oo leh lacag bixin-sida-aad tahay ama ikhtiyaarrada rukunka ah, oo ku habboon shirkadaha ama shakhsiyaadka cabir kasta ha lahaadee.
Tags: datasiftfalanqaynta warbaahinta bulshadadurdur bulsheed